कसलाई राजनीतिज्ञ भनिन्छ ? थाहा छैन, लिडर हुन निडर हुन जरुरी छ: रेखा थापा | दर्पण दैनिक
कसलाई राजनीतिज्ञ भनिन्छ ? थाहा छैन, लिडर हुन निडर हुन जरुरी छ: रेखा थापा
प्रकाशित मिति: २०७७ पुष २९ गते ०३:०९
काठमाडाैं । अभिनेत्री रेखा थापाले लिडर हुन निडर हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त कुरा अभिव्यक्त गरेकी हुन् । अभिनेत्री थापाले फेसबुकमा एक तस्बिर राख्दै क्याप्सनमा लेखेकी छन्, ‘कसलाई राजनीतिज्ञ भनिन्छ ? थाहा छैन । तर, लिडर हुन निडर हुनु जरुरी छ । निडर हुन आफ्नो सानो समूहको घेरा र उपलब्धिको गौरव छोड्न जरुरी छ ।’
उनले आफ्नो स्टाटस पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका पात्रहरूले संकेत गरेको धेरैको आंकलन छ । धेरैले अभिनेत्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई इंकित गरेर स्टाटस लेखेको बताएका छन् ।
२०७७ माघ १० गते ०७:१३
काठमाडौं । जनयुद्धको बेला शक्तिशाली मानिने अनिस-कल्याण बिग्रेडका कमाण्डर तथा पुर्व जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष टुकबहादुर थापा र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष लेनिन बिष्ट प्रधानमन्‍त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गरेका छन् ।
२०७७ माघ १० गते ०२:२१
रुपन्देही । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता युवराज ज्ञवालीले केपी ओलीलाई केशरजंग रायमाझीभन्दा बढी प्रतिगमनकारी र विश्वासघाती नेता भएको टिप्पणी गरेका छन् । ज्ञवालीले कम्युनिष्टको खोल ओढेर देशमाथि गद्दारी गरेको आरोप ओलीमाथि लगाएका छन् ।